Article submitted by: Thunderbolts on 29-Sep-2013
ဦးသိန်းစိန်လိုလားတဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်
မျိုးချစ် ၊ တိုင်းချစ်၊ ပြည်ချစ်အပေါင်း ဒို.လူကလေးများ တို.၊
ကိုသိန်းစိန်တို. မစုကြည်တို.လိုဘဲ ကျုပ်လဲ တလကြာတဲ့ နိုင်ငံတော်အလည်
အပတ်ခရီးက ပြန်လာပြီး အေးအေးဘဲ နေတော့ မယ် တော်လောက်ပါပြီလို.ဆိုပေမဲ့ မနေနိုင်သေးဘူး . ကိုသိန်းစိန် တယောက် လဲ သူ.နည်းသူ.ဟန်နဲ့ အဖေကယ်ပါ ၊ အမေကယ်ပါ ဆိုပြီး သူခိုး ဒါးရိုးကမ်းလုပ်နေပါလားဆိုတာကို
အမြင် တူ ရှိလာတဲ့ အတွက် ၀င်ပါရပြန်ပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ဟာ မပြီးသေး
သော ပန်းချီကား လိုပါဘဲ ဘယ်တော့ မှလဲ ပြီးလိမ့် မယ်၊ ပြည့်စုံ လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး ။
ဦးသိန်းစိန်ကိုဘဲ ဖြစ်စေ၊ တခြားသူ တဦးတယောက်ကိုဘဲ ဖြစ်စေ မေးခြင်
တာက ၊ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် တို.ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေ ဒေသတွေ ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ. ဘယ်ဒေသတွေလဲ လို.၊ စဉ်းစားပြီး ရိုးရိုးနဲ့ ပွင့်ပွင့် ဖြေစေ့ခြင်တယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်က အတွေအကြုံတွေအရ ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရဘို.ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားမရ ၊ မျှော်လင့်လိုမရ ၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ ပါဆိုရင် ဘာပြောကြမလဲ၊ မဖြစ်သေးတဲ့ ကိစ္စ တရပ်သာ ဖြစ်တယ် ၊ လုပ်ရင် ဖြစ်ရမယ် လို.ပြောခြင်သူတွေလဲ့ ရှိလိမ့်မယ် ။ အကြောင်း
နဲ့ အကျိုးဆိုတာ ရှိစမြဲ လို. ဘဂ၀ါဘုရား အမိန်.တော် ထားတယ်။ သိပ္ပံနည်း
အရကလဲ ဒါကို ထောက်ခံတယ် ၊ action and equal (opposite) reaction/ cause and effect လို.ယုံကြည်စွာနဲ့ ပြော ကြတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ ၊ ဘယ်သူ.ကြောင့်လဲ ဆိုတာ အခုလောက်ဆိုရင် သိကြရောပေါ့ ? ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မဟုတ် လွန်ခဲ့ တဲ့ ၆၆ နှစ် ကာလအတွင်းမှာဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ် အဖုံဖုံ ထိုးခဲ့ ကြပေ
မဲ့ ၊ သဘောတူချက်ကို တဖွဲထဲကတောင် လက်မှတ်ထိုးသူသာ လိုက်နာမယ်. မထိုးသူက မလိုက်နာဘူး ဆိုတာတွေ တွေ.ရတယ် ။ ဒီလိုနဲဘဲ ၆၆ နှစ်ကြာ
သာ လာတယ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ တကယ်မရှိတဲ့ တံလျှပ် တခုသာဘဲ။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို.မေးရ မလို ဖြစ်နေပြီ ။
မြန်မာနိင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိတာဟာ ၊ သောင်းကျန်းသူဆိုတာတွေကို အစိုးရအဆက်ဆက်က တမင်မွေး ထားလို.လား။ သောင်းကျန်းတွေကို လိုလားတဲ့ ပြင်ပနိုင်ငံတွေက အားပေးထောက်ခံ ပံ့ပိုးနေလို.လားလို. သိရက်
နဲ့ မေးနေရတယ်။ သူတပါးနိုင်ငံတွေနဲ့ ပါတ်သက်ရင် အထင်အရှား သိသိ
သာသာတွေ.ရမြင်ရတယ်.၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်ရင်လဲ ၊ သာဓကတွေ အထောက်အထားတွေရှိနေတာ တွေ.ရတယ်။ ကိုယ်က ရန်မလို ပေမဲ့ သူများက ရန်လိုလာရင် မေတ္တာတော့ ပွားနိုင်ခြင်မှ နိုင်မယ်၊ အနဲဆုံး ကိုယ်ကိုကိုယ် ကာကွယ် ဘို.တော့ လုပ်ရလိမ့်အုံးမယ် ။
မြန်မာသမိုင်းစဉ်ကိုကြည့်ရင် ပြင်ပ ပယောဂ မပါဘဲ မြန်မာတတွေဟာ နိုင်ငံ
တခု.တည်ထောင်ရေးကိစ္စကို တဦးပေါ်တဦး စိုးမိုးဘို.လက်ဝါးကြီး အုပ်ဘို. ကြိုးစားခဲ့တာဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ လက်မခံ တိုက်ခိုက်နေကြတာတွေကို တွေ.ရမယ် ။ နိုင်ငံထူထောင်တဲ့ ဖြစ်စဉ် အစိပ်အပိုင်းတွေဘဲ ။ နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်။ ကမ္ဘာ.သမိုင်းမှာ လဲ တွေ ရပါတယ် ။ ဒါတွေဟာ အခုချိန်မှယ မပြည်.-မ်ှုတွေ မရင်ကျက်မှုတွေ အဖြစ်တွေ.ရတယ်။
ခေါင်းဆောင်တိုင်းဟာ ကောင်းတယ်ထင်ရာကို လုပ်ကြတာဘဲ မ တထောင်
သား သောင်း ခြောက်ထောင် ကိုတော့ တဦးချင်း-တဦးချင်းတိုင်းအတွက် ကျေနပ်အောင် made to measure လုပ်ပေးနိုင် မယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အများကောင်းစားရေးဘဲ ဆိုဆို. ဒီမိုကရေစီလို.ဘဲ ပြောပြောအများ
ထဲက အများကို ဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေး နိုင်ဘို. အရေးကြီး
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဒဲ့ဒိုးပြောရရင် ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး
သဘောတူချက် လက်မှတ် ထိုး ငြိမ်းချမ်းခဲ့သည့် တိုင်၊ နောက်လိုက်ငယ်သား
တွေက သဘောမတူ လက်မှတ်မထိုးရင် ခေါင်းဆောင် ဘုံပျောက်ရတယ် ၊ နောက်လိုက်တွေက တစင်ခွဲပြီးတိုက်ခိုက်နေမြဲဘဲ ဆိုတာကိုတွေ.ရ တယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဟာ ဖြစ်နေကျ သဘာဝလိုဖြစ်နေပြီ ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဒါမျိုးတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာမို. ဒိူ.တတွေ ကျမှ ထူး ထူးခြားခြားဖြစ်လာတာလို.လဲ ပြော လို.မရဘူး။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာလဲ ရှုံးသူ နိုင်သူ လက်လျှော့သူ မန်လျှော့သူတွေကြောင့် ယာယီ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တွေ ရှိခဲ့ ဘူးပေမဲ့၊ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရာသက်ပန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာတွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်
ချက်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေထက် ဘာမှ မပိုဘူး။ ရှင်းရှင်းနဲ့ ပြတ်ပြတ် ပြောရ ရင် ပဋိပက္ခဖြစ်နေ တဲ့ ၂ ဖက်တို.မှာ တဖက်ဖက်က လုံးဝ စေ့စေ့ ညက်ညက် ကျေပြုန်း ပျက်ဆီးသွားမှ သာ ဖြစ်နိုင် စရာ ရှိတယ် ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့အသိုင်း
အ၀ိုင်းမှာ “ ကြုပင်ခုတ် ကြူငုတ်တောင် မကျန်စေနဲ့၊ ဆွေ ခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်
ဆက်အပြတ်ရှင်း” ဘို. ပြောထားတာ။
ကြမ်းတန်းသော စကား ၊ ရန်လိုသော စကား လို.ဆိုနိုင်ပေမဲ့ ၊ အမှန်တရားနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ စကားရပ်တွေ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလို သဘာဝအလျှောက်ထက် ပိုတဲ့ ကြားလူတချို.က တမင် ဖန်တည်းခဲ့လို. ဘာသာကွဲ အယူအဆကွဲဖြစ်နေရတဲ့ လူပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အစွန်းရောက် ၀ါဒီတွေကို နိုင်
အောင်မထိမ်း နိုင် ရင် ၊ ထိမ်းဘို.မရည်ရွယ်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ စကားကို လဲ ထည်.ပြောနေစရာ မလိုဘူး။ ယာယီဖြစ်စေ ထာဝရဖြစ်စေ ဘာကိုမှ ရလိမ့်
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာက မြန်မာတွဟာ ကိုယ့်ဝမ်းနာလို.မှ ကိုယ်မသိ ၊ မိမိကိုယ်မိမိ အားမကိုးဘဲ ပြင်ပ ဇောတိက ဆေးဆရာတွေကိုအားကိုးနေရင်
တိုင်းရင်းမြန်မာဆေးထက် အနောက်တိုင်းဆေးတွေကို မီခို.အားထားရမှ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တယ် လို. အယူသည်း နေရင်တော. ခက်ရချည်ရဲ့ ။ အနောက်
အုတ်စု ဟာ သူတိုမှ သြဇာမပေးရရင် မစွက်ဖက်ရရင် ဘယ်သူကိုမှ ချမ်းသာ
ပေး နေရာပေးလိမ်.မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ အားလုံး သိဘို.လိုတယ်။
ဒီနေရာမှာ တင်ပြလို.တာက မြန်မာတို.ရဲ့ ၅၅၀ (၅၄၇) နိပါတ်ထဲမှာ ဇောတိက
ဆေးဆရာ ကြီးဟာဆေးဘိုး ၀ါးခ မရလို.ဆိုပြီး လူနာ ခလေးရဲ့ဘခင်ကိုအပစ်
ပေးခြင်တဲ့ အနေနဲ့ ခလေးလူနာကို နောက်ဆုံးဆေးတဖုံနဲ့ အသေသတ် ခဲ့
တယ် ၊ ဒါတောင်ဘုရားစင်စစ်ဖြစ် ခဲ့သေးတဲ့ ဂေါတမ ဟာ ၀က်သားစားပြီး
၀မ်းတော် လားရ တယ်လို. ပြောစမှတ်ရှိတာကို မှတ်ရဘူးတယ်။ ၁၉၈၈ ခုက
စခဲ့တဲ့ ရောဂါသယ် ခလေး (မြန်မာနိုင်ငံ) ဟာ ဆေးဘိုးဝါးခ မရတဲ့ ဇောတိက ဆေးဆရာကြီးတွေရဲ့ လုပ်ကြံမှုကို ခံခဲ့ရတယ် ။ ခေတ် စကားအရကတော့ Protection Fees ဘဲပေါ့ ၊ဘယ်သူတွေ ၀က်သားစားပြီး ၀မ်းတော်လားကြအုံး
မယ်တော့ မသိဘူး။ အရေးကြီးတာ က ဦးသိန်းစိန် တယောက် ဖြစ်စေ၊ မစုကြည်ဘဲ ဖြစ်စေ ခလေးဆေးဘိုးဝါးခ တတ်နိုင်ရဲ.လား - ?
အခုခေတ်မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမြင်မှန်ကြရဲလား။ အမြင် အား ကြညလင် ကြရဲ.လား? မြန်မာ နိုင်ငံ အကြောင်း အာရုဏ်စိုက် ပြောရရင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု တချို.ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရမီ
ကတည်းက ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာ ၀င်ရောက်အမှုထမ်းပြီး ကျန်တဲ့ မြန်မာ သို.မဟုတ် အင်္ဂလိပ် ဆန်ူကျင်တဲ့ မြန်မာတွေကို ရှင်းပစ်ခဲ့ဘူးတယ် ၊ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှင်းပစ်ခဲ့တယ် လို.တောင် ဆိုနိုင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာ သူတိုစိတ်သူတို
မလုံ တဲ့ Guilty conscience နဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကို လုံးဝ ဆန်.ကျင်
ရေး။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ရေးတို.ကို ကြိုးပန်းနေခဲ့ကြတာ အခု ချိန်ထိ ဘဲ
ဘယ်သူတွေဆိုတာလဲ လူတိုင်းသိတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မစုကြည် တို မသိရင် တော့ မပြောတတ်တော့ဘူး။ အနောက်ဖက်ကို အားကိုးလွန်းအားကြီးနေရင် အနောက်ဖက် သြဇာခံ ကြိုးဆွဲရာကတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ၊။ ဘယ်ပုံမြင်လို. ဘယ်ခြုံထွင်နေတယ် ဆိုတာ သိရက်နဲ့ ကိုယ်ကပါ ပါနေရင်
တော့ ကိုယ်လဲ ကျွန်တယောက် နဲ့ ဘာမှမခြားသလို. တိုင်းပြည်နဲ.လူမျိုးကိုပါ
ခေတ်သစ်ကျွန် အဖြစ်ရောင်းစားနေတာဘဲ လို. ဒီကတော့ မြင်တယ်။
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ. မြန်မာတပ်မတော်ဟာဘယ်မှာလဲ ? လူသိများလှ
တဲ့ ပြင်သစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နပိုလီယံ ဘိုနာပတ် ပြောဘူးတဲ့ စကားတရပ်
ကို သွားတွေ.မိတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ.ဲ တိုက်ဆိုင်နေတာ တွေ. ရတယ် ။ ကိုးကားပြ ရရင် “ ခြင်္သေ့တိုဖြင့် ဖွဲစည်းထားသော တပ်မတော် တခုကို သမင် တကောင်က ဦး ဆောင်နေရင် ထို တပ်မတော်သည် ခြင်္သေ့တပ်မတော် ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်” တဲ့ ။ ပြင်သစ်လိုဘယ်လို ဆိုတယ်တော့မသိဘူး ၊ အင်္ဂလိပ်လိုကတော” An Army of lions commanded byadeer will never be an army of lions တဲ့ ။
ဒီနေ.မြန်မာတပ်မတော်ဟာ အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ လမ်းပျောက် နေတဲ့ တပ်မတော်ဘဲ လို. ဆိုရတော့မလား? လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေအလိုကျ ၊ မြန်မာတပ်မတော် ကို Contain လုပ်ဘို. အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်ဖက်အုတ်စုဝင် နိုင်ငံတပ်တွေ . ဒါမှမဟုတ် အနဲဆုံး ကုလ သမဂ နာမည်ခံ နိုင်ငံတကာတပ်များ ဆိုတာတောင် အနောက် အုတ်စုဝင်နိုင်ငံတွေ မပါရင် မပြီးဘူး ဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာ ရောက်ထိမ်းသိမ်းနိုင် ဘို. အနောက်ဖက်က ဖန်တီးနေတုန်းဘဲ လို. မြင်တယ်။ ဒီနေ.မြန်မာ့တပ်မတော် ဟာ ကလေး ကစားစရာ စစ်သားရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ကုန်ပုံတွေ.ရတယ်။ မြန်မာ့ တပ်မတော် ရဲ အခန်းဂဏ္ဍဟာ မြန်မာသမိုင်းမှာ ဒီမှာဒင် တခန်းရပ်
တော့မယ် ထင်ပါရဲ့. ။
လွတ်လပ်ရေး မပေးမီက မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဖျက်သိမ်းဘို. သူ.အဖေ ကိုအောင်ဆန်း ကို မောင့်ဘက်တန်က တဆင့် အင်္ဂလိပ်က တိုက်တွန်း ဖိအားပေးတာ မရခဲ့ လို. အသတ်ခံရတယ်ဘဲ ဆိုဆို ၊ တပ်မတော်က ကရင်
တွေ တောခိုတာ ဘာကြောင့်လဲ အင်္ဂလိပ်တချို.တောင်ပါခဲ့တယ် ။ မြန်မာတပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်ကြတာကစပြီး အင်္ဂလိပ်တပ်မှာ အမှုထမ်းတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်သား လူမျိုးစုတချို.ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ရေး ရည်ရွယ် ချက်နဲ့တောခို ခဲ့ကြတယ် ။ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကို ငယ်ထိပ်ခေါက်ပြီး တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတရပ်လုံး ကို ဆင်းရဲခြင်း ၃ တန်နဲ့ ဆင်းရဲစေခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်းက ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကိုမကြား ခြင်ကြဘူး၊မသိခြင်ကြဘူး၊
လက်မခံခဲ့ကြဘူး။ တပ်မတော်လဲပျက် ၊ မြန်မာနိုင်ငံလဲပျက်အောင် ၀ိုင်းဆော်
ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရတနာ ၃ ပါး ကျေးဇူးကြောင့် မပျက်ခဲ့ဘူး။
၁၉၈၈ ခုထဲကလည်း မစုကြည်နဲ့ တစုဟာ သူအဖေ လက်ထဲမှာ မပျက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တစချင်း နွားဖျက်သလို ဖျက်ဖို.ကြိုးစားတာကို အထင်
အရှား တွေခဲ့ရတယ်။ တပ်မတော် မပျက်ဆီးပေးမဲ့ အထိနာခဲ့တာတွေ သေချာ
တယ် ၊ မစုကြည် ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော အင်္ဂလိပ်ကို လင်လုပ်ခဲ့တော့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသူတွေနဲ့ အဆင်ပြေပုံရှိတယ် ။ တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ
မှာ ဘိုကတော်တွေ အင်္ဂလိပ်မယာေးတွေ ဈေးကောင်း သလို ဘိုကတော်
တွေ ဖင်ပေါ်တာကိုတောင် ဂရုမစိုက်နိုင် ထင်ပေါ်ခဲ့ ဘို.က အရေးကြီးနေခဲ့ ကြတယ် ။ အားကိုးကောင်းကလဲ ရှိနေခဲ့သကိုး ။ မစုကြည် သိထားဘို.က မတော်တဆ သမတ များဖြစ်ခဲ့ရင် အုပ်ချုပ် ဘို. နိုင်ငံရှိရပါလိမ့်မယ် ။ ဒို.နွားတကောင် ဘို.တထောင် ခြေရာလဲပျောက် ရေလဲ နောက် ဆိုတာလို. နိုင်ငံလဲ ပျောက် လူလဲ ပျောက် ဖြစ်သွားမှာကို သတိထားပါ အထင်မသေး
ကိုယ် သမတ ဖြစ်ဘို.က အထိကလား၊ နိုင်ငံတော် ပျက်ဆီး ပြိုကွဲ လို.လဲ အရေးမကြီး ဘူးတဲ့လား၊ မစားရမဲ့ အမဲ သဲနဲ့ ပက်ခဲ့တဲ့ သောက်ကျင့် ရှိနေ
တုန်းဆိုရင်တော့ သူများးတွေလဲ သူတိုအကျင့် သူတို ဖျောက်လိမ့် မယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာ ဟာလဲ ဘာမှ အဓိပါယ် ရှိလိမ့် မယ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိစေလိုတယ်။
အခုပြောနေတာက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဦးသိန်းစိန်က ဇောတိက တွေကို ဖိတ်ခေါ်သံ အကြောင်း။ တဖက် က မစုကြည်ကလဲ ကိုသိန်းစိန်ကို အနောက်
ဖက်နဲ့ ကိုင်ကိုင်ပြီးပေါက်နေတာကိုတွေရတယ်။ သူ.အဖေ လက်ထက်တုန်းက
တော ဂျပန်ကိုရော အင်္ဂလိပ်ကိုပါ အခြေအနေအရ လိမ်မာပါးနပ်စွာသုံးသွား ခဲ့တာကို တွေ.ရတယ် ၊ တချို.ကလဲ ကိုအောင်ဆန်းဟာ ဆိတ်လစေ တဲ့။ တချို.ကလဲ အင်္ဂလိပ်ကို လိုက်လျှောလွန်း အလျှော့ပေးခဲ့ လွန်းလို မြန်မာနိုင်ငံ
အခုလို လိပ်ခဲတင်းတင်းဖြစ်နေရတာလို. ဆိုကြပြန်တယ်၊ တချို.ကလဲ မြန်မာ တွေ ကိုယ်အရိုးနဲ့ကိုယ်ထိုးခံရပြီး ကိုယ့်ဆီနဲ့ကိုယ် အကျော်ခံရတာ ကြွတ်နေတာဘဲ လို.ဆိုကြတယ် ။ အကြွတ် လွန်ရင် အမှုံ. ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောလား။